चितवनमा ज्ञानेन्द्र शाही माथि हातपात गर्ने को हो ? कस्तो छ अहिले स्वास्थ अवस्था ? सबै वास्तविकता बाहिर आयो (भिडियो हेर्नुहोस) – दैनिक नेपाल न्युज
नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि कु*टपिट भएको छ । चितवनको होटेल ग्लोबलमा बसिरहेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि कु*टपिट भएको हो कु*टपिट कसले गर्यो भन्ने खुलेको छैन। शाहीलाई उपचारको लागी काठमाडौं लेराइएको छ । प्रहरीले कु*टपिट गर्ने १ जनालाई समातेको छ । चितवनमा गर्ने भनिएको कार्यक्रम प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउदै ह*स्तक्षेप गरेर कार्यक्रम रोकीदिएपछि होटेलमा आराम गर्न गएका थिए ।भरतपुर महानगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको प्रदाफास गर्ने कार्यक्रम नेपाल प्रहरीले ह*स्तक्षेप गरेपछि बिथोलिएको थियो ।
चितवन चौबिसकोटी चोकमा कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउदै कार्यक्रम गर्न दिएको थिएन । ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहले कार्यक्रम सुरु गर्नै लाग्दा अन्य समुहले ज्ञानेन्द्र शाही वि*रुद्ध कार्यक्रम स्थलमै नाराबाजी गर्न थालेपछि प्रहरीले कार्यक्रम रोकिएको थियो । झ*डपको स्थिती बनेपछि कार्यक्रम गर्न नमिल्ने भन्दै सहभागीको माईक सहित बोकेको झन्डा खोसेको थियो ।चौबीसकोठी वरिपरि कसैलाई बस्न दिएको छैन सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारिएको थियो। भिडियो हेर्नुहोस…